Ukulimala kokubeletha komgogodla wesibeletho kwenzeka ezinganeni ngokuvamile lapho kuzalwa. I-pathology ayikwazi ukubizwa ngokuthi lokhu, futhi akukho lutho olwesabekayo kulokhu uma ukwelashwa kuqalwa ngesikhathi. Into esemqoka - musa ukugijima lesi sifo, kungenjalo kungase kube nezinkinga lapho ingane yengane yodwa ingakwazi ukubhekana nayo. Izinkinga lezi mama angase zingaboni ngesikhathi, kodwa ochwepheshe abanezinzwa ezifanele abazozicacisa. Esinye sezidakamizwa ezivamile ezibekwe ezimweni ezinjalo yiPantog yezingane ezisanda kuzalwa. Lena ikhambi elingenabungozi.
Ezinye iziphambeko ezivela ekuthuthukiseni okuvamile kwengane zivame ukuphawulwa udade onesihlengikazi onolwazi , eze esihlolweni sokuhlola ekhaya. Umama kanye naye bangazama ukuhlola ezinye izinto ezingenakulinganiswa, okuyinto yokuqala, okudingeka zikhokhwe. Isibonelo, ukuthi kunzima kanjani ingane ukuthi ibambe ngomunwe, umama ayifaka ipeni lakhe. Enye i-reflex ebalulekile, engakwazi ukunakwa, ihlolwe emilenzeni. Ingane kufanele ibambelele ngokuqinile esandleni esabekwa unina.
Uma lezi zengqondo zibuthakathaka, kufanele ngokushesha uthintane nodokotela othi, ngendlela eyinkimbinkimbi yokwelashwa, angabeka isiluleko sePantog yezingane ezisanda kuzalwa, ngoba kubalulekile ukunciphisa ithoni ye-muscle eyengeziwe ngesikhathi. Lapho isifunda somlomo wesibeletho sibonakalisiwe, ubuchopho abukwazi ukuthumela kahle izimpawu, ukuphazamiseka kwezimoto, ngokuvamile kuhambisana ne-torticollis, futhi ithoni ye-muscle yanda kakhulu. Futhi imisipha enjalo ayinayo isikhathi sokukhula futhi ingamniki ingane ithuba lokuthuthukisa ngokomzimba. Uma ungaqali ukwelashwa ngesikhathi, izifo ezingathí sina zingase zenzeke, okuzoba nzima ukubhekana nakho kamuva, noma kungenakwenzeka.
Ngaphambi kokuba kuqashwe ukwelashwa ("i-Pantog" efanayo yezingane ezisanda kuzalwa), udinga ukuqhuba izifundo ezikhethekile. Ingane ngokusebenzisa i-fontanel ukuhlola i-ultrasound ebuchosheni, kanye nesifunda somlomo wesibeletho somgogodla. Futhi kuphela odokotela ababeka ukuxilongwa kokugcina futhi banikeze ukwelashwa okuzohlala isikhathi eside, ngokuvamile izinyanga ezimbalwa.
Umuthi "I-pantogamu" usana olusanda kuzalwa unqunywe uma izinguquko zentuthuko zingabalulekile. Lapho ukwephulwa ngokweqile udokotela angabhala izijovo "Korteksin" noma "Cerebralizin". Futhi uma kukhona futhi i-hypoxia, khona-ke imithi ingase isetshenziswe ngemithi "Actovegin". Kulesi simo, ama-Cortexin ne-Actovegin anikezwa nsuku zonke.
Ngaphezu kwemithi, (ngisho nasesimweni esilula, uma ukwelashwa kungaqukatha kuphela i-Pantogam yezidakamizwa), kuyasiza kakhulu ezinganeni ukuba zithole umzimba we-physiotherapy nokuzihlalisa. Umasseur omuhle onokuhlangenwe nakho angenza izimangaliso ngomzimba wengane ethintekayo. Kudingekile ukuba ukhathazeke ngezibuyekezo bese ubuza ngeziqu zomuntu othembela emntwaneni.
Enye inqubo ephumelelayo kakhulu i-electrophoresis yomgogodla wesibeletho, ngokuvamile owenziwa yizifundo isikhathi eside. Ngesikhathi ukwelashwa ingane kufanele ihlolwe njalo yi-neurologist ukuqapha ukuguquguquka kokuthuthukiswa, futhi uma kudingeka, ushintshe ukwelashwa. Isibonelo, imijovo ingashintshwa nesezidakamizwa "I-Pantog". Ezinganeni, umthamo, Yebo, uzoba mncane kakhulu, futhi ngokuvamile ubeka lo muthi njengesiraphu.
Imithi yokwenza "i-Pantog" ayilimazi. I-contraindication kuphela eyingozi kakhulu (ngesimo esibi) isifo sezinso, okuyinto empeleni kuyi-contraindication yemithi eminingi. Ngakho-ke, ikhambi elithi "Pantogame" ngesimo sesiraphu lingabekwa kumntwana kusukela ezinsukwini zokuqala zokuphila.
Lesi sidakamizwa sikhombisa i-nootropic, kanye nesenzo se-anticonvulsant, ukumelana nokuqina kwe- hypoxia yobuchopho, okuphikisana nemiphumela yezinto ezinobuthi. Ukugqugquzela inqubo ye-anabolic nge-neurons, isidakamizwa se-Pantogam sinciphisa ukuhamba kwezimoto, kanti futhi kwandisa umsebenzi wengqondo nomzimba, kepha akufanele unikeze umntanakho yedwa umuthi. Udokotela kuphela ongammisa.
Khetha ikhambi eliphumelelayo ngokumelene namabele
Kabhuki: Ufuna Win - Funda imithetho!